ch 10 မဿဲ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း / ch 10 မဿဲ
10:2 ယခုတဆယ်နှစ်လုံးကိုတမန်တော်များ၏အမည်များ, ဤများမှာ: ပထမဆုံး, ရှိမုနျကို, ပေတရု ဟူ. ခေါ်ဝေါ်သော, နှင့်သူ့ညီအန္ဒြေ,
10:3 ဇေဗေဒဲ၏ဂျိမ်း, နှင့်ယောဟန်သည်မိမိအစ်ကို, ဖိလိပ္ပုနှင့်ဗာသောလမဲ, သောမတ်စ်နဲ့မဿဲအခှနျခံ, နှင့်အာလဖဲ၏ဂျိမ်း, နှင့်သဒ်ဒဲ,
10:4 ရှိမုန်ခါနာန်, ယုဒရှကာရုတ်နှင့်, သူကိုလည်းသူ့ကိုသစ္စာဖောက်.
10:9 ကိုရွှေအပိုင်ဖို့ရွေးချယ်မထားပါနဲ့, မဟုတ်, ငွေ, မဟုတ်သလိုပိုက်ဆံကသင်၏ခါးပတ်အတွက်,
10:10 ခရီးအဘို့မဟုတ်, ပြဋ္ဌာန်းချက်, မဟုတ်နှစ်ခုအင်္ကျီ, မဟုတ်သလိုဖိနပ်, မန်ထမ်းများ. လုပ်ဆောင်သောသူသည်မိမိအဘို့ထိုက်တန်ပါတယ်.
10:11 အခုတော့, သငျသညျဝင်ပါလိမ့်မယ်ဘာပဲမြို့သို့မဟုတ်မြို့တွင်းသို့, ဒါကြောင့်အတွင်းခံထိုက်သောသူအဖြစ်မေးလျှောက်. သငျသညျထွက်သွားသည်အထိထိုအရပ်၌နေထိုင်.
10:12 ထိုအခါ, သငျသညျအိမျသို့ဝင်သောအခါ, ကနှုတ်ဆက်, ဟုဆို, '' ဤအိမျတျောမှငြိမ်းချမ်းရေးဆု။ ''
10:13 လျှင်, တကယ်ပါပဲ, ထိုအိမျကိုခံထိုက်ပေ၏, သင်၏ချမ်းသာပေါ်မှာငြိမ်ဝပ်စွာနေပါလိမ့်မယ်. သို့သော်ထိုသို့မထိုက်မတန်လျှင်, သင့်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းသည်သင်ထံသို့ပြန်လာပါလိမ့်မယ်.
10:14 အကြင်သူသည်သင့်လက်ခံရရှိခဲ့သည်မဟုတ်, မဟုတ်သလို, သင်၏စကားကိုနားထောငျပေး, ထိုအိမျသို့မဟုတ်မြို့မှထွက်ခွာ, သင်၏ခြေအနေဖြင့်ဖုန်မှုန့်ပယ်လှုပ်.
10:15 အာမင်ငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, အဲဒါကိုတရားသဖြင့်စီရင်ရာကာလ၌သောဒုံမြို့နှင့်ဂေါမောရဘို့ကပိုခံရလတံ့, ထိုမြို့သူမြို့သားများအတွက်ထက်.
10:16 အကယ်, ငါဝံပုလွေ၏အလယ်၌သိုးကဲ့သို့သင်တို့ရှိရာသို့ငါစေလွှတ်မည်. ထို့ကြောင့်, မြွေကဲ့သို့သမ္မာသတိရှိသောနှင့်ချိုးငှက်ကဲ့သို့ရိုးရှင်းဖြစ်.
10:17 သို့သော်ယောက်ျားသတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်. သူတို့ရုံးသို့သင်သည်လွှဲပြောင်းပေးရန်လိမ့်မယ်များအတွက်, သူတို့တရားစရပ်၌သင်တို့ကိုရိုက်ပါလိမ့်မယ်.
10:18 သင်တို့သည်လည်းငါ၏ဘို့အလိုငှါသောမင်းတို့နှင့်ရှင်ဘုရင်နှစ်ပါးမတိုင်မီဦးဆောင်ခံရကြလိမ့်မည်, သူတို့ကိုရန်နှင့်တပါးအမျိုးသားတို့အားသက်သေဖြစ်မည်အဖြစ်.
10:19 ဒါပေမဲ့သူတို့ကသငျသညျလွှဲပြောင်းပေးရန်သည့်အခါ, စကားပြောဆိုရန်မည်သို့ဒါမှမဟုတ်ဘာကိုစဉ်းစားရန်ရွေးချယ်ကြဘူး. ထိုအချိန်နာရီ၌သငျအားပေးရလတံ့သောအရာကိုပြောဆိုရန်အဘို့အ.
10:20 ကစကားပြောပါလိမ့်မယ်သူကိုသငျသညျမဟုတျပါဘူးများအတွက်, ဒါပေမယ့်သင်တို့အဘ၏ဝိညာဉ်တော်သည်, သင်၌အဘယ်သူသည်ပြောမည်.
10:21 နှင့်အစ်ကိုအသေသတ်ခြင်းကိုအစ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးရန်ဦးမည်, နှင့်အဖေသားလွှဲပြောင်းပေးရန်ဦးမည်. နှင့်ကလေးများမိဘများတဘက်၌ထနှင့်၎င်းတို့၏သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်. ဆောင်ခဲ့ဦးမည်.
10:22 သငျတို့သညျငါ၏နာမကို ထောက်. အားလုံးအားဖြင့်မုန်းကြလိမ့်မည်. သို့သော်မည်သူမဆိုသည်းခံလိမ့်မယ်, ပင်အဆုံး, တူညီသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရကြလိမ့်မည်.
10:23 အခုတော့သူတို့ကတဦးတည်းမြို့၌သင်တို့ကိုညှဉ်းဆဲရသောအခါ, အခြားသို့ပြေး. အာမင်ငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, သငျသညျဣသရလေမြို့ရှိသမျှကုန်ကြပါပြီမည်မဟုတ်, လူကိုပြန်၏သားတော်မတိုင်မီ.
10:24 တပည့်ဆရာထက်မသာ, မဟုတ်သလိုသူ့သခင်အထက်ကျွန်ဖြစ်၏.
10:25 သူကမိမိဆရာကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်သောတပည့်များအတွက်လုံလောက်သောကြောင့်, နှင့်ကျွန်, သူ့သခင်နဲ့တူ. သူတို့မိသားစု၏ခမညျးတျောကိုခေါ်ကြလျှင်, '' Beelzebub,'' မည်မျှပိုပြီးသူတို့အားမိမိအိမ်သူအိမ်သားများ?
10:26 ထို့ကြောင့်, သူတို့ကိုမကြောက်ပါဘူး. ဘာမျှမထင်ရှားလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းဖုံးလွှမ်းသည်, မဟုတ်ကိုဝှကျထားလူသိများလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း.
10:27 အဘယ်သို့ငါသည်မှောင်မိုက်၌သင်ပြောပြ, အလငျး၌ဟောပြော. တဖန်သင်တို့နားအပါး၌တိုးတိုးအဘယ်သို့ကြားနာရသည်, အဆိုပါရရှိနိုင်ရန်အိမ်ခေါင်မိုးအထက်တရားကိုဟောပြော.
10:28 ထိုအခါခန္ဓာကိုယ်ကိုသတ်သောသူတို့၏အမျိုးအမကြောက်ပါနဲ့, ဒါပေမယ့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုသတ်အံ့သောငှါမတတျနိုငျများမှာ. ဒါပေမယ့်အစားဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံထဲမှာကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့တတ်နိုင်တော်မူသောသူကိုကွောကျရှံ့.
10:29 တဦးတည်းအသေးအကြွေစေ့ဖြင့်ရောင်းချနှစ်ခုစာငှက်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်? သို့သော်လည်းထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုတဦးတည်းသောသင်တို့အဘမရှိဘဲမြေပေါ်မှာပြိုလဲကြလိမ့်မည်မဟုတ်.
10:31 ထို့ကြောင့်, မကြောက်ပါနဲ့. သင်သည်များစွာသောစာငှက်ထက် သာ. မြတ်ကြ၏.
10:32 ထို့ကြောင့်, လူတို့ရှေ့မှာငါ့ကိုဝန်ခံသောသူမည်သည်, ငါသည်လည်းငါ၏ခမည်းတော်ရှေ့မှာဝန်ခံမည်, ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသူသည်.
10:33 အကြင်သူသည်လူတို့ရှေ့မှာငါ့ကိုငြင်းပယ်လိမ့်မည်ဟု, ငါသည်လည်းငါ၏ခမည်းတော်ရှေ့မှာငြင်းပယ်လိမ့်မည်ဟု, ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသူသည်.
10:34 ငါသည်မြေကြီးအပေါ်သို့ငြိမ်းချမ်းရေးပေးပို့လာသည်ကိုမစဉ်းစားပါနဲ့. ငါလာ, ငြိမ်းချမ်းရေးပေးပို့ဖို့မ, ဒါပေမယ့်ထားကိုထား.
10:35 အကြောင်းမူကားငါသည်သူ၏အဘဆန့်ကျင်တဲ့လူကိုဝေယူဆီသို့ရောက် လာ. ,, သူမ၏မိခင်ဆန့်ကျင်ပြီးသမီး, သမီးကို-In-ပညတ်တရားကိုသူမ၏မိခင်-In-ပညတ်တရားကိုဆန့်ကျင်.
10:37 အကြင်သူသည်ငါ့ကိုထက်မိဘကိုပိုပြီးချစ်သောသူငါ့ကိုမထိုက်မတန်. အကြင်သူသည်ငါ့အပေါ်မှာအသားသို့မဟုတ်သမီးကိုချစ်သောသူသည်ငါ့ကိုမခံထိုက်သည်.
10:38 အကြင်သူသည်မိမိလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုတက်ယူမထားဘူး, ငါ့နောက်သို့လိုက်ငါ့ကိုမထိုက်မတန်.
10:39 အကြင်သူသည်မိမိအသက်ကိုတွေ့, ရှုံးလိမ့်မည်. အကြင်သူသည်ငါ့ကြောင့်မိမိအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်တွေ့လိမ့်မည်.
10:40 အကြင်သူသည်သငျသညျအားလက်ခံတွေ့ဆုံ, ငါ့ကိုလက်ခံ. အကြင်သူသည်ငါ့ကိုလက်ခံ, ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူအားလက်ခံတွေ့ဆုံ.
10:41 အကြင်သူသည်ပရောဖကျတအားလ​​က်ခံတွေ့ဆုံ, ပရောဖကျတ၏နာမ၌, ပရောဖကျတ၏အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်. အကြင်သူသည်အားလက်ခံတွေ့ဆုံအရုံ၏နာမ၌ရုံပဲ၏အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်.
10:42 အကြင်သူသည်ပေးရကြမည်, ပင်ဤအနည်းဆုံးတ, သောက်ရေအေးတစ်ခွက်ကို, တစ်ခုတည်းကိုသာတပည့်၏နာမ၌: အာမင်ငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာ, သူသည်မိမိအကျိုးကိုမရဘဲမရကြလိမ့်မည်။ "